Nin 145 Shahaado Jaamacadeed ah ku hantay muddo 30 sano ah. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka September 19, 2017	0 204 Views
Delhi (Himilonetwork) – Professor VN Parthiban, oo wax ka dhiga magaalada Chennai ee dalka Hindiya wuxuu qaatay 145 degree jaamacadeed ah 30-kii sano ee lasoo dhaafay. Mana lahan qorshe uu ku joojiyo wax-barashada waqtiga nolosha uga dhiman.
La dhacsanaanta maadooyinka qaar ee jaamacadda loogu dhigay iyo laamaha kale oo uu heli karay, Parthiban wuxuu go’aansaday inuu ku laabto Jaamacadda kana qaato degree-ga labaad. Kadibna mid saddexaad. Deedna 142 shahaado oo dheeri ah.
Previous: Aadaankii ugu horreeyey oo laga maqlay Qasriga Alhambra ee dalka Spain.
Next: Jeed-jeedsiga Jeenyo iyo Jilicsanaanta Xiriirka.
Obama oo Aqalka-Cad ku casuumay arday Muslim ah
Dhibanad Face-book dartiis halis u gashay!